Manchester United oo qandaraas cusub ku abaal-marineysa mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Manchester) 28 Nof 2020. Manchester United ayaa ku abaal-marineysa qandaraas cusub ciyaaryahanka khadka dhexe reer Brazil ee Fred, kaddib markii uu qaab ciyaareed fiican soo bandhigay mudooyinkii ugu dambeeyay.
27 jirkan ayaa bilowgiisa kooxda Manchester United aad u dhibtooday kaddib markii uu uga soo dhaqaaqay naadiga Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine sanadkii 2018 aduun lacageed dhan 52 million pounds, laakiin dhawaan ayuu ku guuleystay inuu si cajiib ah u soo muuqdo.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Manchester Evening News”, ciyaaryahanka ayaa laga yaabaa inuu qandaraas cusub ka helo kooxda Manchester United, kaddib markii uu ku muujiyay qiimihiisa ka hoos shaqeynta tababaraha reer Norway ee Ole Gunnar Solskjaer.
Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa qandaraaska uu haatan kula joogo Red Devils wuxuu sii socon doonaa illaa iyo 2024, waxaana qeyb ka ah heshiiska qodob u ogolaanaya inuu ku daro hal xilli ciyaareed kale.
Fred ayaa ka qayb qaatay 29 kulan oo kooxda Man United ah xilli ciyaareedkii hore ee Premier League, halka uu ciyaaray 7 kulan xilli ciyaareedkan 8 kulan ay kooxda ciyaartay, sidoo kale wuxuu ka qeyb galay saddex kulan oo tartanka UEFA Champions League, lagu daray labo kulan oo Carabao Cup ah, laakiin kuma uusan guuleysan inuu dhaliyo ama uu baaso wax gool ah.